मेरो यौनको पहिलो अनुभुती - Nepali Sex Tube
मेरो यौनको पहिलो अनुभुती……
यस ताका म १८ र्बषको थिए, कलेज पढन पहाडबाट मधेश झरेको, हट्टाकट्टा जवान थिए, डेरा बस्न थाले पल्लो कोठामा पनि म सँगै पढने साथी र उनको मुमा र बहिनी बस्थे । चिन्जान पछी अलिक घनिश्टता बढन थाल्यो । बुबा काठमाडौं तिर जागिरे थिए । त्यसले र्गदा कहिले काही चाडर्पवमा आउनु हुन्थियो । यसरी नै साथीको परिवार सँग हिमचिम बढनु थाल्यो । यसरी नै दिनबित्न थाल्यो ।एक दिन अचानक साथीको बाबाले उनलाई काठमाडौं बोलाउनु भयो उनको बाबाले काठमाडौंमा हाकिमलाई भनेर जागिर मिलाउनु भएछ । त्यसैले पढदै जागिर खान, उ आमा बहिनीलाई छाडेर काठमाडौं तिर लाग्यो । अब बिहान बेलुकी पढने साथी पनि छुट्यो, मलाई एक्लोपन महसुस भयो ।
उनको बहिनी अनु पनि कक्षा ८ मा पढथिन । त्यसैले बिहान् बेलुकी नजनेको कुरा सिकाउने जिम्मा मेरो काधमा आयो । म कसरी नर्कन सक्थे ।अनु एक त स्कुले र उनकोआमासँग दोकान भएकोले प्राय बिहान बेलुकी मात्रा भेट हुन्थियो । अनु पनि बिहान बेलुका सिकाइ दिनु भन्दै मेरो कोठामा आउथिन । म न जानेको कुराहरु सिकाइ दिन्थिए । अनी कहिले काही जिस्काइ दिन्थे । शायद पहिला किन मेरो नजर पुगेन ? शायद मेरो गिद्देदृष्टिल नपरेकोहुन सक्छ ।
उनी पनि तरुनी भै सकेकी थिइन । कालो र्वणकी, मोती झै दात मिलेको, काटेको कपालहाँस्दा खल्टो र्पने गाला, पुष्ट छाती उमेरको अनुपातमा अलिक ठुला थिए उनका अनार दानाहरु ‘. अब मेरो मनले उनलाई कु बिचारले र्हेन थाले छ । हरपल उनको प्रतिक्षा हुन थाल्यो मेरो मनमा छटपट्टी बढन थाल्यो । उनी सँग हरपल साथ रहन चाहन्थे। शनीवारको दिन थियो पानी अली अली परी रहेको थियो । त्यो दिन घरमा हामी दुई प्राणी मात्रा थियौ । आन्टी पनि दोकान जानु भएको थियो । एक्लो मौका पाएर म पनि उनको कोठामा पुगे तर उनी त्यहा थिइन । अनी न भेटे पछी पिशाब र्फेन सौचालय तिर लागे उनी त बाथरुममा पो नुहाउदै गीतगुनगुनाउदै रहिछिन ।
सौचालय र बाथरुम को एउटै भित्ता भएकोले र्गदा दुलोदालीबाट नुहएको देखिन्छ कि भनेर दुलो खोज्न थाले दुलो कही थिएन ।सौचालयबाट निस्केर ढोकामा छ की दुलो भनेर खोज्न थाले एउटा भेटाए ।।सौचालयबाट निस्केर ढोकामा छ की दुलो भनेर खोज्न थाले एउटा भेटाए । त्यहीबाटै चिहाउने बिचार गरे र त्यहा बाट चिहाउन मात्रा के खोजेको थिए ढोका खुल्यो । उनी माथि लड्न पुगे। के र्गनु भएको भन्दै अनु चिचाइन म लाजले रातो पिरो भए मेरो वाक्य फुटेन ।
उनले आफुलाईटावेललेमात्रा बेरेकी रहिछिन त्यसैले उनको टावेल खुस्के छ, अनु र्निब्रस्त्रभइनर हतार हत्तार आफ्नो गुप्ताङ हातले छोप्न थालिन । अनु लाजले रातोपिरो भएकी थिन । त्यहा मौनता छायो । आफुलाई सम्हाल्दै म उठे । म कोठा तिर लागे र अनु कता लागि थाहा भएन । कोठामा पुग्दा मेरो शरीरमा करेन्ट लागेको थियो, अलिकती पनि पश्चताप थिएन । सम्झन थाले त्यो पल उनको र्निवस्त्र शरीर पुष्ट छाती अनी गुप्ताङमा अली अली पलाएको रौ अनी उनको स्र्पश अनी उनको शरीरबाट निस्केको मदहोस वासना मेरो काम इच्छालाई जगाइ रहेको थियो । यो मेरो पहिलो अनुभब थियो त्यसैले म मख्खथिए । यसो मेरो लिङ छामेको त लिङले पानी फाली सकेको रहेछ केही अगाडि मेरो फुलिएको लिङ, तिग्रालाई सिरानी हालेर सुती सकेको थियो । म शिथिलभै सकेको थिए ।
म पनि अनुको गुप्ताङमा छिराउन पाए कस्तो हुन्थियो, भन्ने कल्पना र्गदै खाटमा ढल्के ।अनु बेलुकी पनि मेरो नजिक परिन । पढन पनि आइन, मलाई देख्ने बितिकै भाग्न थालि देखे पनि लजाएर सिर निहुराउ थिन ।यसरी नै केही दिन बित्यो । एक दिन अचानक प्रकट भइन मेरो कोठामा अंक गण्ाित सिकाइ दिनु भन्दै, म पनि सिकाइ दिनु र्पयो भनेर सिकाउनु थाले । तर मेरो आँखा अनुको दुध तिरै थियो । म उनीबाट निस्किएको वासनामा हराउन थाले, झसँग भए दाई खै सिकएको त ? न निदाइ नै सपना देखन थालेछु । सायद अनुले पनिअनुभब गरिन होला मेरो ब्यथा म पनि पुन सिकाइ दिने निहु र्गदै मेरो घुडाले उनको दुधमा स्र्पश र्गन थाले ।
उनी पनि थाहा नपाए झै गरी रहिन। मेरो तनमन आन्दोलित हुँदै गयो, उनी रातोपिरो हुँदै गइन । यो नै शायद उनको मौन स्विक्रिती थियो या मेरो सोच ? यो म यकिन गरेर भन्न् सक्दिन । म उनलाई बिस्तारी सुम्सुम्याउन थाले ।। उनले आँखा बन्द गरी सकेकी थिन म झन आतुर भए मेरो ओठ उनको पिपलपाते ओठमा लगेर चुम्न थाले उनी पनि त्यसै र्गन थालिन यती बेला सम्म उनी मेरो बाहुपासमा कसिएकी थिन म लिन थिए उनलाई उत्र्कशमा र्पुयाीउन उनी पनि मेरो अनुसरण र्गदै थिइन ।
मैले बिस्तारै बिस्तारै उनको दुध र्सट बाहिरैबाट माडन थाले। त्यती बेला सम्म उनको र्फक र्फकेर रातो पेन्टी देखिदै थियो अब मेरो हाथ उनको त्यो कोमल तिघ्रामा सल्बलाउन थाल्यो । उनको गुप्तान्ङको सुगन्ध आइरहेको थियो । म झन लठ् हुँदै थिए । उनको योनि छाम्नलाई मेरोहात उनको पेन्टी भित्र छिराए, उनको योनी रसाएको थियो । रौ अली अली भएको महसुस गरे अनी मेरो औंला उनको गुप्तान्ङ भित्र बाहिर र्गन थाल्यो, उनी शिथिल हुँदै मेरो काखमा लडिन ।
मेरो लिङ तेसै त ९० डिग्रीमा खडा भएको थियो । शायद मेरो लिङले उनलाई बिझाए छ अनी उनले पनि बाहिरबाटै लिङ सुम्सुम्एउन थालिन । तर उनको अनुहार पढदा लाग्थियोउनी मेरो लिङ उनको योनीमा पसाउन आतुर थिइन बिस्तारी बिस्तारी उनको सटको बटनहरु खोल्न थाले, उनको मुहार अझ मदहोस् देखिन्थियो । गुलाबी ब्रा लगाएकी रहिछन उनको दुध त्यस्मा उम्कौला झै गरेर कसिएको थियो सुम्सुम्यौदै त्यसलाई पनि खोली दिए गुलबी दुधका मुन्टा म तिरनै घोचौला झै ठाडो थियो । अब यवम रितले उन्को र्फक पेन्टी सबै फुकाले । अब उनी मेरो सामु र्निशत्र भइन उनको लजालु मुहार अनी झुकेको शिर मलाईअसधैं मन र्पयोउ अनी उनको योनीमा मेरो लिङ पसाउन आतुर थिए ।
म पनि फटाफट लुगा खोल्न थाले उनी टोलाएर हेरदै थिइन शायद मेरो लिङ्को आँकारदेखेर झस्किन मैले के भयो भनेर सोधे ? तपाईंको त कत्रो ठुलो रहेछ हतियार भनेर झस्केको नि पुन मैले सोधे के तिमीले अरु सँग पनि यौन सम्बन्ध राखेको छौ छैन भेनेर शिर हल्लाइन पुन मैले सोधे अनी कसरी थाहा पएउत मेरो ठुलो छ भनेर उनले मेरो जवाफ दिन तर मेरो जिद्दीको अगाडि उनको केही लागेन दाईको सुत्दा देखेको मात्र हो ।अब म उनी माथि खप्टिए र बिस्तारि लिङ उनको योनीको मुखमा लगेर छिराए तर मेरो लिङको टुप्पो मात्र र्छियो उनी कराउन थालि अह्ह मरेनी अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह अह्ह मैले लिङ निकल्नै र्पयोा ।
अनी मैले मेरो लिङ मा थुक लगाए र पुनउनको योनिमा लगेर रखे चुम्न थाले उनको पिपल पाते ओठ यसो गदा उन म जोसआए छ अनी भन्न् थालि बिस्तारि छिराउनुन अनी मैले बिस्तारि बिस्तारि र्गदै मेरो लिङ लाई जोडले ढक्का दिए उनी डल्लो परिन मरेनी मेरे अह्ह अह्ह अह्ह दुख्यो भयो भन्न् थालि म कहाँ छडनेवाल थिए अझ जोड जोडले धक्का दिन थाले । शायद उनको पनि पिडा कम भए छ क्यर उनी पनि मुनी बाट साथ दिन थालि । यस्तै ४ (५ मिनेट पछी मेरो लिङ बाट पानी निस्कियो । मेरो ठेलाई कम हुँदै गयो । म उनी माथिनै खप्टिएर उनलाई किस र्गदै उनको दुधको मुन्टो खेलाउन थाले । म जान्छु भन्दै मलाई उनले खाटमा झारी उनी आत्ती खुन भन्दै यसो हेरेको त मेरो लिङको वरीपरी खुन लागेकोरहेछ । झट्ट मेरो आँखा उनको योनिमा पुग्यो त्यहा पनि खुनको टाटोहरु थियो । उनी लुगा सम्हाल्दै लागिन ढोका बहिर तर हिडाइ अलिक फरक थियो ।
पिसाब गर्न बाथरुम जादा पल्लो घरको झ्यालमा आँखा पर्दा